अनौठा कुरा Archives - Page2of 250 - Sawal Nepal
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार रातिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय
काठमाडौं । सरकारले हाल जारी खुकुलो लकडाउनलाई आगामी साउन ७ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार राति सम्पन्न बैठकले लकडाउनलाई साउन ७ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यस्तै हवाइ उडान र सीमा नाका पनि साउन ७ गतेसम्म बन्द रहने निर्णय भएको बैठक पछि एक मन्त्रीले जानकारी दिए । गत जेठ २८ गते
चितामा आ’गो लगाएपछि चल्मलाउन थाले व्यक्ति, ड’राएर भा’गे मलामी
अन्तिम संस्कारका लागि श वलाई चितामा राखिएको थियो । चितामा आ गोसमेत लगाइएको थियो । तर एक्कासी चितामाथि राखिएका ती व्यक्तिले टाउको हल्लाएपछि को’कोहोलो मच्चि’यो । मृ त ठानिएका व्यक्ति चल्मलाउन थालेपछि केही मलामी भागेको भारतीय मिडिया आजतकले बताएको छ । भारतको ओडिशास्थित कपकहाला गाउँका स्थानीय सिमाञ्चल मलिकलाई अन्तिम संस्कार गर्दै गर्दा टाउको हल्लाएको देखेपछि
२३ दिनको बच्चीले २ जनालाई दिइन् नयाँ जिन्दगी
लन्डनमा २३ दिन अघि जन्मीएकी एक बच्चीले २ जनालाई नयाँ जिन्दगी दिएकी छिन् । ती बच्चीलाई जन्मदै देखि मुटुसम्बन्धि समस्या थियो । डाक्टरहरुले उपचार पछि पनि बाच्ने आश नभएको बताएपछि बाबु आमाले अंगदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनको मिर्गोला २ जनालाई दिएका हुन् । उनका माशंपेसीहरु पनि जोडिएका थिएनन् । उनी सबैभन्दा कम उमेरको
प्रेमिकालाई पानीमुनि गएर विवाहको प्रस्ताव राख्ने युवक डुबे त्यही पानीमा
अमेरिकाका स्टिभ वेबरले आफ्नी प्रेमिका केनेशा एन्टोइनलाई पानीमुनि गएर विवाह प्रस्ताव गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेका छन् । छुट्टी मनाउनका लागि तान्जानिया पुगेको यस जोडीको सबभन्दा खुशीको पल दुःखमा परिणत हुन पुग्यो । पेम्पा टापुबाट केही पर मान्टा रिजोर्टमा एक जलमग्न क्याबिनमा उनीहरू बसिरहेका थिए । वेबरले पानीमुनि गएर प्रेमिकालाई ‘मसँग बिहे गर्छ्यौ ?’ भनी सोधे
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब भन्दा बढी
विराटनगर, १० असार : विराटनगर महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कूल रु तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजारको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ रु ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार ७००, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ रु ७६ करोड ८२ लाख
भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका युवकद्वारा आत्महत्या
बझाङ – बझाङको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–७ मजखोरी माध्यामिक विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिनमा एक युवकले आत्महत्या गरेका छन् । गएराति सोही वडाको बुडखोरीका ३० वर्षीय १ युवकले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् । उनी ३ दिन अघि मात्र भारतको बैंग्लोरबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष पदम मण्डेलका अनुसार उनी ६ गतेदेखि क्वारेन्टिनमा बसिरहेका
विवाह हुनुपूर्व पुरुषले बोल्ने ६ झुट !
काठमाडौं । विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो । जसमा दुई जोडीका साथै दुई परिवारको मिलन हुने गर्दछ । तर विवाहभन्दा अगाडि धेरै पुरुषहरु केटीलाई इम्प्रेसन पार्नका लागि सयौँ झुट बोल्न पछि हट्दैनन् । उनीहरु केटी र उनको परिवारलाई इम्प्रेसन गर्न धेरै झुट बोल्छन् । आज हामी तपाईलाई केटाहरुले बोल्ने ६ झुटहरुको बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस वि.सं.२०७७ असार ६,शनिवारको राशिफल
वि.सं.२०७७ असार -६,शनिवार, ई.सं.२०२० जून – २०, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० तछलागा,प्रमादी,उत्तरायण, ग्रीष्म, आषाढ कृष्णपक्ष तिथि-चतुर्दशी , ११:३२ बजे उप्रान्त औंसी,नक्षत्र-रोहिणी , १२:२० बजे उप्रान्त मृगशिरा,योग-शूल , १५:२२ बजे उप्रान्त गण्ड, करण-शकुनि ११:३२ बजेदेखि चतुष्पद , २३:४८ बजे उप्रान्त वव,चन्द्रराशि-वृष,आनन्दादि योग-श्रीवत्स,सूर्योदय-५:१०,सूर्यास्त-१९:०१ दिनमान-३४ घडी ३६ पला, व्रत/पर्व-सर्वार्थसिद्धि योग १२:२० बजेसम्म,दर्शश्राद्ध, निशि बार्ने औंसी, सायन सूर्य कर्कट राशिमा
न्यायाधीशले रुँदै फैसला सुनाएपछि वृद्धले भने– मेरो स्वर्गलाई मबाट खोसियो
काठमाडौं । अदालतमा एउटा यस्तो मुद्दा आयो, जसले सबैको दिमाग हल्लाइ दियो। न्यायाधीश समेत भावुक भए, मुद्दा हेरेपछि न्यायाधीशको आँखा रसायो । न्यायालयलाई मुद्ला फैसला गर्न कठिन भयो । आखिरमा के थियो ? त्यस्तो मुद्दा अदालतमा आउने पारीवारिक मुद्दा प्राय सम्पत्ति विवाद र अन्य घरायसी विषय हुन्छन् । तर त्यो मुद्दा भने बिल्कुलै फरक छ
चालू आवभन्दा दश अर्ब कम बजेट ल्याउँदै प्रदेश २ सरकार
प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै १० अर्ब कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करिब २९ अर्बको बजेट ल्याउने भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालूतर्फ रु १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख